Ozbekistana: Mikolokolo Ny Fahalalahana Miteny Ny Fanaovana Blaogy · Global Voices teny Malagasy
Ozbekistana: Mikolokolo Ny Fahalalahana Miteny Ny Fanaovana Blaogy
Voadika ny 16 Avrily 2018 15:08 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, Deutsch, Shqip, Español, 繁體中文, 简体中文, English
Vao haingana, nokilasian‘ny Departemantam-panjakana Amerikana ho anisan'ireo firenena “folo voalohany” amin'ireo firenena tena mpanao didy jadona erantany i Ozbekistana. Nandritra ny efa ho roapolo taona nanjakany, ny filoham-pirenena I. Karimov sy ny ankolafiny no nandray an-tanana ny fifehezana ireo lafim-piainana rehetra ao amin'ny firenena – ara-politika, ara-toekarena ary ara-tsosialy. Ny fiarahamonim-pirenena sivily, izay nipoitra sy niroborobo tao amin'ny firenena, taorian'ny fianjeran'ny Firaisana sovietika, no nahatsapa ny tsindry henjana ataon'ny fitondran'i Karimov, indrindra indrindra taorian'ireo zava-nitranga tao Andijon tamin'ny taona 2005 izay niafara tamin'ireo sazy iraisam-pirenena namely an'i Ozbekistana. Manana fahefana feno amin'ireo media mahazatra ao amin'ny firenena ny fanjakana. Na dia nohindrahindrain'i Karimov teny anatin'ny kabary nataony imasom-bahoaka aza ireo soatoavina demokratika, tsy hita tao amin'ny firenena ny fahalalahana maneho hevitra. Kanefa, ankehitriny, mipoitra ny feo amin'ny alàlan'ireo media vaovao – ireo blaogy.
Iray tamin'ireo karazana mpikatroka amin'ny tambajotra i Gerchik, miady hevitra mikasika ireo olana sosialy sy politika ao amin'ny firenena ao anaty blaoginy. Tao amin'ny lahatsorany vao haingana indrindra, manoratra mikasika ireo antony mety handaozan'ny vahoaka an'i Ozbekistana i Gerchik ary mitanisa ireo olam-piainana ara-tsosialy izay mampijaly ny fiarahamoniny [ru]:
1. Fahatapahan-jiro any amin'ireo tanàna mandritra ny roa na herinandro maromaro, ary na dia mandritra ireo andro tsy fiasàna aza. Ny antony: fikorontanan'ny asan'ireo mpitantana ao amin'ny Sampan-draharaham-panjakàna misahana ny Herinaratra, izay manangona ny fandoavana herinaratra. Fanampin'izay, mandray kolikoly izy ireo amin'ny alalan'ny “fanodinana miverina” ny kaonteranà herinaratra.
2. Voafetra ho ora 4 isanandro ihany ny famatsiana herinaratra any amin'ireo faritra ambanivohitra;
3. Misy tsy fahampiana goavana ny entona voajanahary ilain'ny filàm-bahoaka, na dia manankarena entona voajanahary aza izahay (firenena);
4. Ny Ozbeky antonontonony iray tsy afaka mamelona ny fianakaviany amin'ny fanatontosàny ny asany ao Ozbekistàna, ka manery ireo olona ho lasa mpiasa mpila ravinahitra
5. Ny fianakaviana Ozbeky antonontonony iray tsy mahavita mandoa ireo filàna andavanandro;
6. Somary tsisy henatra mihitsy ireo mpiasam-panjakana mandainga ampahibemaso fa mandray karama 200 Dolara isam-bolana ny olom-pirenena Ozbeky iray
7. Ary dia voafidy fanintelony indray ireo mpiasam-panjakana ireo!
Ny lahatsoratra, izay ahitana taratra ny marina any amn'ireo faritra maro ao Ozbekistana, dia niteraka tsikera marobe avy amin'ireo olona hafa, izay miaina ihany koa ireo olana mitovy amin'izany. Mivaky toy izao ny tsikera iray:
Monina ao amin'ny faritra ambanivohitr'i Tashkent [renivohitra] aho. Isanandro ny fahatapahan-drano sy entona mandritra ny ririnina manontolo. Miverimberina ny fahatapahan-jiro ao anatin'ny andro iray .. Monina any Syrdarya ireo ray amandreniko. Tsy nanana entona mihitsy izy ireo nandritra ny ririnina manontolo. Eny fa na dia ankehitriny aza, tena kely fia kely ny fahazoany izany. Tsy mahazo rano fisotro ao an-tranony ny olona ary voatery mandeha lavitra maka rano.
Ao anaty lahatsoratra iray hafa, manombana ny lafiny politika ao Ozbejistàna i Gerchik ary mametraka fanontaniana iray amin'ireo mpamaky izay napetraky ny iray tamin'ireo namany, izay toa nanandrana nanamarina ireo fihetsiky ny fitondrana ankehitriny :
Saino anie ny trangan-javatra iray e: nandia ny làlanao ianao teo amin'ny asanao nandritra ny fotoana lava. Nony farany, lasa filoham-pirenena ianao. Inona no hataonao? Hanandrana hanatsara ny fiainanao ve ianao amin'ny alalan'ny fanngonana harena misavovona sy amin'ny alalan'ny fakàna ny harem-pirenenao – ireo tranobe lafividy, ireo marika fiarakodia tena raitra, yacht, trano eny amoron-dranomasina sy ireo fandraharahana goavana – sa, hovainao mba ho tsara ny trangan-javatra misy eo amin'ny firenena, amin'ny alalan'ny fandaniana ireo vola rehetra, ndeha hatao hoe, ho fampiroboroboana ny fanabeazana ao amin'ny firenena?
Nitarika adihevitra nivaivay teo amin'ireo mpamaky ity lahatsoratra ity. Samy nanome ny heviny mikasika ny toedrahraha ny tsirairay tamin'izy ireo.
Sarotra ny mamaly an'io fanontaniana io. Satria nahoana? Voalohany indrindra, tsy ho lasa filoham-pirenena velively aho. Faharoa manaraka izay, tsy amin'ny filoha ihany ny olana. Saingy raha lasa filoha aho, izaho aloha no karakaraiko voalohany indrindra. Iza no hanao mifanohitra amin'izay? Heveriko fa tsy misy.
Manoratra mikasika ilay famoriana ireo vehivavy anjatony maro natao tsy ela akory tao afovoan'i Urgench i Khorezm. Mitaraina izy ireo mikasika ny famindràna ny tsena tao an-tanàna ho any amin'ireo faritra ivelan'ny tanàna sy ny fizaràna ireo toeram-pivarotana ho aminà toerana vaovao. Araka ny tatitra nataon'i Khorezm, naniry ny hifanakalo hevitra tamin'ny governemanta ireo mpanao fihetsiketsehana ireo. Kanefa, voasakan'ireo mpitandro ny filaminana nitandahatra izy ireo nony injay nanakaiky ny Hokimiyat [tranobem-panjakana ao an-tanàna] [ru]:
Nosakanan'ny Andiany Manokana ireo vahoaka… Na tsy nanana fitaovam-piadiana aza ireo vehivavy, nanao aroloha sy fiarovam-batana matevina ny mpitandro ny filaminana… Vokatr'izay, hipoka olona ny làlana… Nafàna ny toe-draharaha. Siosion-dresaka no heno hoe nitarika fahasarotana teo amin'ny toe-draharaha ny fidarohan'ireo mpitandro ny filaminana ny iray tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana… Nisy foibem-pibaikoana afaka mifindrafindra toerana an'ny Andiany Manokana teo amin'ny manodidina, izay, raha toa ka ratsy ny toe-draharaha, dia afaka manome baiko handraisana fepetra henjana kokoa… Kanefa, tafitan'ny mpitandro ny filaminana ny nanatsitokotoko ireo mpanao fihetsiketsehana ary nony farany nanjavona ny vahoaka tamin'ny mitataovovonana… nanapaka hevitra ireo mpandray anjara ny hitondra ny olan'izy ireo any amin'ny Fahitalavitra teo an-toerana na tany amin'ireo mpanao gazety an'ny RFE/RL.